Vita tetsy amin’ny efitrano malalaky ny “Plan” etsy Anosy tamin’ny sabotsy 17 aogositra 2019 teo ny famindram-pahefana teo aminy sy ny filoha nodimbiasany, ny loholona Rehosevo. Teniny voalohany taorian’io famindram-pahefana io ny amin’ny fahatokisany ny fitondram-panjakana ankehitriny amin’ny hanatanterahana an’ireo programa 22 izay novolavolain’ireo manampahaizan ao Androy entina hampandrosoana ny Faritra misy azy ireo. Hilana fifanomezan-tanana sy ny firaisankinan’ny Antandroy rehetra anefa ny fanatanterahana ny fampandrosoana an’Androy, hoy izy ary efa misy mihitsy ny fanatanterahana asa ankehitriny. Mila vahana ao anatin’ny fotoana fohy kosa ary tokony hatao laharam-pahamehana mihitsy, hoy ihany Atoa Jacques Bruno Fils Goulamaly, ny kere sy ny haintany fa efa tena mampikaikaika ny mponina tanteraka. Farany dia nambaran’ity filoha vaovaon’ny Fitea.m ity fa misokatra hatrany ny varavaran’izy ireo amin’ny resaka fifampidinihana entina hampandrososana ny Faritra Androy.